पाँच करोडको घर दान – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
पाँच करोडको घर दान
२०७१ पुष २१, सोमबार ०४:०१ गते
नारायणगढ । पूर्वसांसद सुश्री मैयादेवी श्रेष्ठले आफू बस्दै आएको भरतपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ मा रहेको पाँच करोड रूपैयाँ मूल्य पर्ने घर जग्गा ट्रष्ट बनाएर हस्तान्तरण गरेकी छन् ।
ट्रष्टको अक्षयकोषका लागि श्रेष्ठले थप नगद एक करोड रूपैयाँ प्रदान गरेकी छन् । विभिन्न संघसंस्थालाई लाखांै रूपैयाँ नगद र जग्गा दान गर्ने व्यक्तिका रुपमा मैयादेवी प्रख्यात छिन् । ‘अब विभिन्न क्षेत्र, निकाय र व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने काम ट्रष्टमार्फत हुनेछ’ ट्रष्टका अध्यक्ष प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने ।
नारायणगढको पुतलीबजारजस्तो व्यस्त क्षेत्रमा रहेको तीनतले घर श्रेष्ठले साउन ६ गते ट्रष्टको नाममा पास गरिदिएकी हुन् । वैशाख १९ गते दर्ता भएको ट्रष्टको बारेमा आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको हो ।
आमा गणेशकुमारी श्रेष्ठ र बुबा डिठ्टा बीरबहादुर श्रेष्ठकी छोरी मैयादेवीको जन्म विसंं १९८५ साल असोजको फूलपातीका दिनमा तनहुँ बन्दीपुरमा भएको थियो । छोरी जन्मेकोमा निराश भएर मैयादेवीलाई सिस्नोको झ्याङमा मिल्काइएको थियो । पछि मैयादेवीको बुबाले उनलाई आफ्ना छोरा बराबरकै अंश दिएका थिए ।
‘पुख्र्यौली सम्पत्तिमा पाएको जग्गा उहाँले धेरैलाई वितरण गर्नुभयो । सबैको मूल्य जोड्दा अहिले ५० करोड रूपैयाँको हाराहारीमा हुन आउँछ’ पत्रकार सम्मेलनमा ट्रष्टका महासचिव टंक पौडेलले जानकारी दिए । विसं. २००३ सालमा तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसकी सदस्य भएकी मैयादेवी विसं. २०४८ सालमा गोरखाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भइन् ।
उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत भएकी छन् । सुश्री श्रेष्ठले विसं. २०५६ सालमा काठमाडौँ रवि भवनमा रहेको सवा करोड रूपैयाँ बराबरको जग्गा नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवनका लागि प्रदान गरेकी थिइन् । चितवनको मैयादेवी कन्या कलेजको लागि १२ कठ्ठा जग्गा किन्न र भवन बनाउन सबै खर्च मैयादेवीले नै बेहोरेकी हुन् ।
धार्मिक क्षेत्र देवघाटमा बनाएको घर पनि मैयादेवीले विसंं. २०५४ सालमै ट्रष्ट बनाएर हस्तान्तरण गरेकी थिइन् । त्यस्तै, नारायणगढमा रहेको बालकुमारी कन्या माविलाई आमाको नाममा १० कठ्ठा जग्गा दान गरेकी छन् । संघसंस्थालाई मात्रै होइन, व्यक्ति विशेषलाई पनि उनले जग्गा दान गरेकी छन् ।
‘नेपालमा मात्रै उहाँले गरेको दानको लेखाजोखा राख्ने हो भने अरब पुग्छ । विदेशमा गएर पनि नेपाली समुदायलाई सहयोग गर्नुभएको छ’ ट्रष्टका अध्यक्ष तथा श्रेष्ठका भदाहा प्रेमकुमारले भने । भारत, थाइल्याण्ड र लण्डनमा आश्रम बनाउन मैयादेवीले नगद सहयोग गरेकी छन् ।
‘मसँग सहयोगको अपेक्षा राख्ने धेरैलाई दिन सकेको छैन । जसका कारण मलाई समाजसेवी भन्न पनि लाजै मर्नुहुन्छ’ मैयादेवीले भनिन् । देशको राजनीति सप्रेको र चाँडै संविधान जारी भएको हेर्ने आफ्नो एकमात्र इच्छा रहेको उनले बताइन् । ‘समाज सुधार्न राजनीति पनि राम्रो हुनुपर्छ । राजनीति सुधार्न यो वा त्यो नभनी जनताको लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ’ मैयादेवीले भनिन् ।
चितवनमा दुई संक्रमितको मृत्यु
चितवनमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या देशकै उच्च !